मोर्चासँग वार्ता छाडेर कमल थापा किन गए दिल्ली ? | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / मोर्चासँग वार्ता छाडेर कमल थापा किन गए दिल्ली ?
मोर्चासँग वार्ता छाडेर कमल थापा किन गए दिल्ली ?
१६ मंसिर, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासँगको वार्ता छोडेर उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा सोमबार दिल्लीतिर लागे । वार्तालाई निर्णायक बनाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारी वार्ता समितिका संयोजक नै भारततिर लाग्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
साथै व्यक्तिगत भ्रमण भन्दै दिल्ली भएपछि थापाले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
अनौपचारिक भ्रमणका रुपमा आध्यात्मिक गुरु रविशंकरलाई भेट्न भन्दै उपप्रधानमन्त्री थापा दिल्ली हुँदै बैंङलोर गएका थिए । तर, मंगलबार दिल्ली आएका उनी राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त छन् ।
संयोग के परेको छ भने हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै आएका खुमबहादुर खड्का पनि अहिले बैङलोरमै छन् । स्वास्थोपचारपछि उनी बहिनीका घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
बुधबार उपप्रधानमन्त्री थापाले दिल्लीमा आफ्ना समकक्षी सुस्मा स्वराजलाई भेटेका छन् र अब उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने प्रयासमा छन् ।
भारतको अडान कायमै
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँगको भेटमा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजले पुरानै भनाइ दोहोर्‍याएकी छिन् । भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री थापाले पारवहन अवरोधका कारण नेपाल गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै यसलाई हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा स्वराजले भारतको तर्फबाट कुनै अवरोध नरहेको दावी गरिन् । ‘नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान हुनासाथ आपूर्ति सुचारु हुने’ आश्वासन उनले थापालाई दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले बताएका छन् ।
स्वराजको भनाइ उद्वृत गर्दै उनले ट्वीट गरेका छन्’नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो परिस्थिति सामान्यीकरण गर्नुपर्छ ।’
दिल्लीमा लाइन मिलाउने प्रयास
काठमाडौंमा वार्तालाई निर्णायक बनाउन पहल भइरहेका बेला भारतको विश्वास आर्जन गर्नका लागि थापालाई दिल्ली पठाइएको सूत्रहरुको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेर नै दिल्ली गएका हुन् । र, उनले दिल्लीमा त्यसअनुसार भेटवार्ता गरिरहेका छन् । मोदीसँगको भेटका लागि थापाले रवीशंकरको च्यानलसमेत प्रयोग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र भारतीय जनता पार्टीका नेता राम माधवलाई पनि भेट्नेछन् ।
एमाले नेतृत्वमा मधेस समस्या समाधानका लागि मधेसी मोर्चासँग मात्र वार्ता गरेर हुँदैन भन्ने छ । र, भारतसँग पनि लाइन मिलाउने प्रयास सुरू भएको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री थापाको यो भ्रमणप्रति प्रधानमन्त्री ओलीसमेत निकै आशावादी छन् । त्यसको असर मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा समेत देखिएको छ ।
यता काठमाडौंमा बुधबार निर्णायक वार्ता हुने भनिएपछि दलहरुको तयारी छैन । प्रमुख तीनदलले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार मधेसी मोर्चाको मागबारे औपचारिक धारणा नै बनाएनन् । उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो- ‘वार्तामा केही हुने छाँट छैन, उपप्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणप्रति धेरै आश गरेको देखिन्छ ।’
थापा दिल्ली जानुअघि भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली सुटुक्क नेपाल आएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई भेटेर दिल्लीको सन्देश सुनाए ।
जोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भारतविरोधी नभएको सन्देश पठाएका थिए ।